मानव गणना परियोजनाहरू धेरै गैर-विशेषज्ञहरु को काम सजिलै कम्प्युटर द्वारा हल छैन भनेर सजिलो-कार्य-ठूलो-मात्रा समस्या समाधान गर्न संयोजन। तिनीहरूले प्रयोग विभाजित-लागू-संयोजन विशेष सीप बिना मानिसहरूले हल गर्न सकिन्छ भनेर सरल माइक्रो-कार्यहरू धेरै मा एक ठूलो समस्या तोड्न रणनीति। दोस्रो पुस्ता मानव गणना प्रणाली पनि मानव प्रयास विस्तार गर्न मेशिन शिक्षाका प्रयोग गर्नुहोस्।
सामाजिक अनुसन्धान मानव गणना परियोजनाहरू अवस्थामा जहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले वर्गीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, कोड, वा लेबल चित्र, भिडियो वा पदहरू प्रयोग गरिने सबै भन्दा संभावना छ। यी वर्गीकरण अन्त छैन; तिनीहरूले अनुसन्धान लागि कच्चा माल छन्। उदाहरणका लागि, राजनीतिक manifestos को भीड-कोडन प्रवास तिर ध्यान को गतिशीलता बारेमा सिद्धान्त परीक्षण गर्न प्रयोग गर्न सकिएन।
अगाडी आफ्नो अंतर्ज्ञान निर्माण गर्न, टेबल 5.1 सामाजिक अनुसन्धान मा प्रयोग गरिएको छ मानव गणना कसरी थप उदाहरण प्रदान गर्दछ। यो तालिका ग्यालेक्सी चिडियाघर विपरीत, धेरै अन्य मानव गणना परियोजनाहरू माइक्रो-कार्य श्रम बजार (जस्तै, अमेजन यांत्रिक टर्क) प्रयोग, भनेर देखाउँछ। म तपाईंको आफ्नै ठूलो सहयोग परियोजना सिर्जना गर्ने बारे सल्लाह प्रदान गर्दा म सहभागी प्रेरणा को यो मुद्दा फिर्ता छौँ।
तालिका 5.1: सामाजिक अनुसन्धान मा मानव गणना परियोजनाहरूको उदाहरण।
पार्टी manifestos कोडिङ पाठ माइक्रो-कार्य श्रम बजार Benoit et al. (2015)
200 अमेरिकी शहर मा कब्जा विरोध समाचार लेख घटना जानकारी निकाल्न पाठ माइक्रो-कार्य श्रम बजार Adams (2014)
अखबार लेख को वर्गीकरण पाठ माइक्रो-कार्य श्रम बजार Budak, Goel, and Rao (2016)
घटनाको जानकारी निकाल्दा 1 विश्व युद्ध मा सैनिकहरु को डायरीहरू देखि पाठ स्वयंसेवकहरु Grayson (2016)
नक्सा परिवर्तन पत्ता लगाउन तस्बिरहरू माइक्रो-कार्य श्रम बजार Soeller et al. (2016)